Kratom na ọtụtụ ndị na-iji na-emeso ịda mbà n'obi, nchegbu, opiate ndọrọ ego, na ihe mgbu, na ina iji ya na-aghọ nnọọ dị ukwuu dị ka ina ime ka botanical n'uzo na ezighi ezi. Ebe ọ bụ na Oregon gbara na-ekwu na ugbu a ajụjụ iwu ọnọdụ nke Kratom, ụfọdụ na-ala ndị bi na-enwe nchegbu na steeti a pụkwara ịkpali machibido botanical. Otú ọ dị, Portland nwere otu n'ime ndị kasị ibu ọrụ bases n'ihi na nke a na osisi o yikarịrị obodo ahụ ga-mbà agha na-ogwu iwu na Oregon. Maka ugbu a, ọ dị mkpa ịmara na nke ugbu a iwu banyere Kratom na-esi Kratom na Portland ma ọ bụ n'akụkụ ndị ọzọ nke Oregon na 2014. Ịzụta Kratom Online si atụ aro mgbere ebe a.
Mmetụta bara uru nke Kratom Jiri
Kratom bụ ihe ogwu na na-abịa site Mitragyna Speciosa osisi na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia. The ogwu a maara na-dịkwuo gị ịta, mma gị na ọnọdụ, na-eme ka ị nọrọ jụụ. O nwekwara a mara aka na-agbake ọgwụ ọjọọ riri ahụ, ọ na-eases mgbu na-enweghị na-emerụ mmetụta. N'ihi na ogwu calms gị na mma gị na ọnọdụ, ọtụtụ ndị chọpụtara na nke a dị mma na-ehi ụra aka na onye ọzọ na nkà mmụta ọgwụ na-enyere ọgụ ịda mbà n'obi.
Ọ Kratom iwu na Oregon?
Ugbu a, e nwere ọ nweghị ihe mgbochi ma ọ bụ rue mgbe ego bụla na Kratom na steeti Oregon. The alkaloids na ogwu anụbeghị e machibidoro ma ọ bụ na-ewere a na-achịkwa umi. Ma n'ihi na ndị ọzọ na-ekwu na-ama iwu na ojiji nke ngwaahịa, e-arịọnụ mgbali-eme ka ọ n'uzo na ezighi ezi gafee USA.
Egwu banyere Kratom ke mgbasa ozi ị ga si ndị mmadụ enweghị ihe ọmụma banyere otú ogwu na-arụ ọrụ a na-eji. The mgbasa ozi si portrayal nke na umi dị ka onye ọzọ n'okporo ámá ọgwụ ọjọọ Heroine ma na-emegbukarị mgbu killers dịghị aka Kratom aha mgbe nile. The ihe ọma bụ na e nweghị ndị ọkà mmụta sayensị na-egosi na-akwado mgbasa ozi si na-ekwu na ogwu eme ka ndị mmadụ elu. Nke a na-omume nanị na-eme mgbe a ole na ole ndị mmadụ chọrọ ihe n'ụzọ na ndị ogwu na-enwe olileanya nke inwe a iwu elu. Ihe ka ọtụtụ ná ndị na-eji ya maka ọgwụ nzube, usoro mgbasa ozi na nēche ichefu na bi.
Ebe ịzụta Kratom na Portland & Oregon
Ọ bụ ezie na Kratom bụ iwu na Oregon, e nwere ndị a otutu mkpọsa na-echekwa na-ebu ya. Ọtụtụ ebe na-ebu ogwu na Portland na isi ụlọ ahịa. Otú ọ dị, nnweta nwere ike ịbụ mmachi na a na-echekwa mgbe ana atọ ma ọ bụ karịa ugboro nnukwu price. Ọ bụrụ na ịzụta elu-ọgwụgwụ ewere Kratom extracts ka OPMS ma ọ bụ Captain Amsterdam, ị ga-mgbe ụfọdụ-akwụ $4.00 maka otu usoro onunu ogwu mgbe ị nwere ike ịzụta otu ego dị ka a nnukwu ntụ ntụ maka $0.40. Lelee anyị na ndu ka mmetụta nke Kratom nje ebe a.
O yiri ụzọ kasị mma iji nweta a ọkpụrụkpụ ego nke ogwu na Oregon bụ site internet. Ị nwere ike iji na-eche a di na nwunye nke ụbọchị tupu ịnweta gị iji, ma ọ dịkarịa ala na ị ga-a ibu nhọrọ nke Kratom ngwaahịa na a ọzọ oké ọnụ price. Arena Ethnobotanicals bụ ezigbo ụlọ ọrụ na-amalite na ebe ọ bụ na ha nwere a iche iche ọkọnọ nke ogwu na ihe ezi uche na mbupu ahịa Oregon na ike nke United States. Ha nwekwara oké ọnụ ahịa na ị bụ n'aka-amasị na otu ounce nke gburu Kratom epupụta na-ere n'ihi na dị ka ala dị ka $12.99.
I buy my Kratom online (out of respect for the host I won’t list the name here) but I pay $280+ ( I can’t remember the exact dollar amount) maka 32 ounces. This stuff helps depression but it doesn’t work over night. You will not really notice what is going on for about 2 izu.
Do not buy Kratom from headshops. Those guys are trying to get you to pay 3 ma ọ bụ 4 times what Kratom costs and it will not get you high.
Nkwado Usoro * 0+10=?
Olee otú chepụta Kratom wepụ Dosages
Omume Kratom Ban ụfọdụ U.S. States - Ọ Ga Metụta Gị?
Gịnị bụ Ize Ndụ nke Kratom Iri Mmadụ Ahụ?